“ပျူပျူငှာငှာ လူတကာကို” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » “ပျူပျူငှာငှာ လူတကာကို”
Posted by TTNU on Aug 11, 2012 in Arts & Humanities, Cultures | 41 comments
လောကသာရဆုံးမစာ လင်္ကာပိုဒ်(၂၁) မှာ
ပျူပျူငှာငှာ၊ လူတကာကို၊ သာသာချိုချို၊ ချစ်ဖွယ်ဆို၍၊စိုစိုပြည်ပြည်၊ ကျင့်မူနည်ဖြင့်….
လို့အစချီရေးထားပါတယ်။ လူအပေါင်းကို ချစ်ဖွယ်အမူအရာနှင့် ချိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆံ
ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများမှာ ပြောဆိုဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရိုသေ
မှု၊ကိုင်းရှိုင်းမှု၊ အစုစု ရှေးပဝေသဏီကတည်းကစတင်ရှိခဲ့တာပါ။ ထီးသုံးနန်းသုံး၊ထီးဟန်နန်းဟန်၊
တွေနဲ့ ယဉ်ကျေးခဲ့ ကြဖူးပါတယ်။ ခေတ်တွေ ပြောင်းလာသည်နှင့်အမျှ နှုတ်ဆက်ခြင်း၊
မိတ်ဆက်ခြင်း၊ အရိုအသေပြုခြင်းတွေ ပြောင်းလာလိုက်တာ တွေလည်း
ကျွန်မတို့ ပထမဆုံး နှုတ်ဆက်ခြင်း ကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
တကယ့်ကို ကျက်သရေရှိတဲ့ စကားစုလေးပါ။
အချို့ ကတော့ ရင်းနှီးမှုအနေနဲ့
စသဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမေးခွန်းမျိုးတွေနဲ့ နှုတ်ဆက်တတ်ကြပါတယ်။
အချို့ ကတော့ ဘာမှမပြောဘဲ ပြုံးရုံမှသာပြုံးပြကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ခေါင်းကလေး
ဘယ်လိုနည်းတွေပဲသုံးသုံးပါလေ၊ ပျူပျူငှာငှာ၊ လူတကာကို၊ သာသာချိုချို၊ ချစ်ဖွယ်ဆို၍ နှုတ်
ကျွန်မတို့အပေါင်းအသင်း အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း အတူရှိခဲ့ကြပေမဲ့ မခေါ်ဖူး မပြောဖူး ကြရင်
စတင်ခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်ဖို့ အခက်ကြုံတတ်ပါတယ်။ ကြားလူ တစ်ယောက်ယောက်က မိတ်
ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရပါတယ်။ မိတ်ဆက်
ပြီးပြီဆိုရင်တော့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး လေးစားသမှုနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ချင်လည်းဆက်၊ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းညိတ်ပြချင်ပြ၊ ဦးညွှတ်ချင်ညွှတ်၊ လုပ်ကြပါတယ်။
တစ်ခါက မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို အခြားတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖူးတယ်။ဒုတိယ
မိတ်ဆွေ အပြုအမူ အရမ်းရိုင်းတဲ့အတွက် ပထမမိတ်ဆွေကို ကျွန်မ သိပ်အားနာခဲ့ရဖူးတယ်။
ဒုတိယမိတ်ဆွေက မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့တစ်ခဏမှာ ဖိနပ်ကုန်းစီးလိုက်တယ်။ ပြီးမှစီးရင်
လည်းရရက်သားနဲ့။ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကိုလည်းမကြည့်ဘူး။ တော်တော်ကြာမှ အဲဒီဖိနပ်ကိုင်
တဲ့ လက်နဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ လှမ်းပေးတယ်။ သာသာချိုချို၊ ချစ်ဖွယ်ဆို၍ နှုတ်ဆက်
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားပြောကြတဲ့အခါမှာ မိမိရဲ့ပျူငှာမှုကို စကားလုံးမှာ သာမက ကိုယ်အမူအရာမှာလည်းဖော်ပြရပါမယ်။ တစ်ချို့ လူကိုမကြည့်ဘဲ စကားပြောတတ်
ကြပါတယ်။ ခင်မင်မှု၊ လေးစားမှု တို့ကို ကိုယ်လက်အမူအရာတို့အပြင် ဖော်ရွေ ရည်မွန်တဲ့ မျက်လုံးအကြည့်နဲလည်း ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ လေးစားမှုကိုပြကြရာမှာ ကန်တော့ခြင်း၊ ဦးညွတ်ခြင်း၊ လက်အုပ်ချီခြင်း၊ လက်ပိုက်ခြင်း၊ စသဖြင့် မိမိ နှုတ်ဆက်မဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အဆင့်ပေါ်
မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး အရိုအသေပေးကြလေ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်မ ပုဂ္ဂလကိ ခံစားချက်လေးပြောရရင်တော့ စကားပြောရင် မျက်လုံးထဲကို စိုက်ကြည့်ပြီး
အဲဒီမျက်လုံးထဲမှာ ချစ်ခင်ယုံကြည်မှု၊လေးစားခင်တွယ်မှု၊ အလေးထားမှု တွေ ပြနေတာကို
သဘောကျတယ်။ ကိုယ်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံနေသလို စကားလာပြောသူရဲ့လိပ်ပြာကိုလည်း ကိုယ်ဖမ်းထားရသလိုပါပဲ။ အဲဒီအခါမှာ ပြောသူရော နားထောင်သူရော နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ မျက်လုံးတွေ ပြုံးနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မန္တလေး အ.ထ.က(၁၀) ဟာ ဟိုတုန်းက သီပေါမင်း ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ဒိုင်အိုသံတဲကျောင်း
ပါ။ ဒီဘက်ခေတ် အထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် ကျောင်းသူ/သားတွေ ကျောင်းတက်ကြတဲ့အခါ
မှာလည်း ဆရာ/မတွေကို နှုတ်ဆက်ကြရင် “မင်္ဂလာပါ” လို့ လက်အုပ်လေးချီပြီးဦးညွှတ်ကြပါ
တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အခြားကျောင်းတွေမှာလည်းဒီလို ပျူငှာချိုချို၊ ချစ်ဖွယ်ဆို၍ နှုတ်ဆက်
လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အင်မတန်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ အခြေခံယဉ်ကျေးမှုစရိုက် လက္ခ
ကျွန်မတို့ မြန်မာယဉ်ကျေးမှု မဟုတ်ပေမဲ့ အခုခေတ်အခါမှာလှိုင်လှိုင်ကြီးသုံးနေတဲ့ လက်ပြ
သင်္ကေတတွေထဲက တစ်ခုလေး အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။
လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို လက်ဖဝါးကို မိမိနဲ့စကားပြောသူဘက်ကို ထားပြီးပြရင်
Peace ငြိမ်းချမ်းရေး ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ လက်ဖဝါးကို ကိုယ့်ဘက်ထားပြီးပြောရင်…
Two fingers ina‘V’ sign means victory and peace when the palm is
towards the person(s) being gestured. If the palm is the other way
it is consideredarude sign or challenge.( http://club.myce.com/f1/
ရိုင်းပျတဲ့ လက္ခဏာမှန်းသတိမထားမိဘဲ၊ မသိဘဲကျွန်မတို့ မြန်မာအမျိုးကောင်းသား/သမီးတွေ
ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် လက်ညှိုးလက်ခလယ်နှစ်ချောင်းကို တွင်တွင်ကြီး ရှေပြန် နောက်ပြန်ထောင်ပြပြီး
ဆိုတော့ … ပျူပျူငှာငှာ လူတကာကို စကားနဲ့တစ်မျိုး အမူအရာနဲ့တစ်သွယ် ပြောဆိုဆက်ဆံ
ကြရာမှာ ကိုယ်မသိလိုက်လို့မှားသွားနှိုင်တဲ့ စကား၊ အမူအရာ စတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့
နောင်ဝယ်လူကြီးဖြစ်လာမဲ့ ကျောင်းတော်သူ/သားများကို သတိပေး၊ အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်။
ကျနော့် အနေနဲ့ကတော့ အခြား အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆို
ပျူပျူငှာငှာ နှုတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် ..
သို့ပေမယ့်လို့လည်း ကိုယ်နဲ့ တအား ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတဲ့ ဘော်ဒါတွေကိုတော့
အဲ့ဒီလို နှုတ်ဆက်ဖြစ်ဘူးဗျ .. သို့ပေသိ ..
“ဟေ့ကောင် … သားကြီး … မင်း ဘယ်က လှည့်လာတာလဲ”
ဆိုတာမျိုးတွေတော့ဖြင့် ပြောဖြစ်ပါတယ် …
ကနဦး စာလာဖတ်သူအဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါရစေ။
လို့နှုတ်ဆက်တာကိုက ပျူငှာလွန်းနေပြီပဲ။ ဒီထက်ရင်းနှီးတာဘာရှိဦးမလဲ။
ဒီတော့ မောင်ရင်နဲ့တွေရင် တီချာက
“ဟောတော့ မောင်အံစာ ငါ့သား ဘယ်တုန်းကရောက်နေတာလဲ?” လို့
ဆရာမကြီးရေ အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ စာသားတွေမို့ ကူးယူပြီး ဖေ့ဘုတ်မှာ ဆရာမကြီးရဲ့ နာမည်နဲ့ ပြန်ဖော်ပြခွင့်ပြုပါ
အခုခေတ် လူငယ်တွေ , မိန်းခလေးတွေပိုများမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ဆရာမကြီးရဲ့ စာကို သူရို့အားလုံးကို ပေးဖတ်မယ် ခင်ဗျ
ရွှေကြည်ကတော့သိပ်ပြီးဒါ့ပုံမရိုက်ဖြစ်တော့ တော်သေးတယ်။ မှတ်သားစရာပါပဲ။
မိတ်ဆက်ခြင်းကနေ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခဲ့ကြသလို။ တစ်ခါတလေ မိမိက ဘာအလုပ်အကိုင်လုပ်တဲ့ ဘယ်သူပါလို့ မိတ်ဆက်တော့မှ တစ်စားပွဲတည်းထိုင်နေရာကနေ နောက်စားပွဲကိုပြောင်းသွားကြတဲ့ သဘောထား မပြည့်တဲ့သူတွေလည်း ကြုံဖူးပါတယ်။
တီချာ Facebook မှာတင်ထားပါတယ်။ မောင်ရင့်ဆီ Share လိုက်မယ်လေ။
အပြုံးလေးနဲ့ နှလုံးအေးစေတာ ကောင်းပါတယ်။
ဘာပြုလို့ ထထွက်သွားတာလဲဆိုတာ အဖြေသိဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်နော်။
FBI ကမို့လား။ CIA ကမို့လား။ The GESTAPO ကမို့လား။ သူတို့ ထ ထွက်သွားတော့
ကိုခ က ဘာပြောလိုက်သလဲ။ အဲဒီအကြောင်း စာတစ်ပုဒ်ရေးပါ့လား။ စိတ်ဝင်စားစရာ
တီချယ်ပြောလိုက်မှ ပိုစ့်လေးရေးဖို့ သတိရသွားတယ်၊ ကျေးဇူးပါဘဲ၊ ပိုစ့်ကြမှဘဲအဖြေထဲ့ပေးလိုက်တော့မယ် ခင်ဗျ။
ဆရာမကြီး TTNU ရေ
ပို့စ်ကောင်းလေးတပုဒ်လို့ ယူဆလို့ သိပ်ကွန်မန့်တွေ မများခင် ကျနော်ကွန်မန့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ် ခင်ဗျ။ တယောက်စကား တယောက်နားမှာ မခါးရအောင် ဆိုပြီး ဆိုရိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကလည်း လက်ရှိလူ့လောက ထဲမှာတော့ ၁၀၀% ကျင့်သုံးဖို့တော့ ခက်နေပါသေးတယ်။ ကျင့်သုံးနိုင်ရင်တော့လည်း အတိုင်းထက်အလွန်ပါ။ တခါတလေတော့လည်း ချိုချိုသာသာ ပြောလို့မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ မရိုင်းစိုင်းစေပဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောရတာလည်း ရှိပါတယ်။ နည်းနည်း ချဲ့ပြောပါရစေ။
အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘုရားရှင်ကို အဘယမင်းသားက မေးလျှောက်ဖူးပါတယ်။ မေးတာကလည်း အကြံနဲ့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက တိထ္တိတွေရဲ့ သာဝကကြီးကိုး။ အဲဒီအချိန်တုန်းကပါ။ သူ့ကိုလည်း သူ့ဆရာကြီးတွေက ဒီလိုမေးဖို့ သင်ပေးလိုက်တာပါ။ မေးခွန်းက ဘုရားရှင်ဟာ သူတပါး စိတ်မချမ်းသာ ဖြစ်စေမယ့်စကား တနည်း အခံရခက်စေမယ့် စကားပြောဖူးသလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ နှစ်ဘက်ခွ မေးခွန်းပါ။ ဘုရားရှင်က အေး ငါဘုရား မပြောခဲ့ဖူးလို့ ဆိုရင် ရှင်ဒေဝဒတ်ကို သံဃာကို သင်းခွဲရင် မြေမျိုပြီး အဝီစိငရဲ ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ စကား အရှင်ဘုရားဘာလို့ ပြောခဲ့ပါသလဲလို့ မေးမယ်ပေါ့။ မုသာဝါဒပြောပါတယ် ဆိုပြီး စွပ်စွဲမယ် ဆိုတဲ့ အကြံနဲ့ပါ။
တကယ်လို့ ဘုရားရှင်က ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်လို့ ပြောရင် အရှင်ဘုရား ဘုရားစင်စစ် ဖြစ်ပါလျှက်နဲ့ သူတပါး နားမခံနိုင်တဲ့စကား ကာယကံရှင် စိတ်ဆင်းရဲစေမယ့် စကားဘာလို့ ပြောရပါသလဲ ဆိုပြီး စွပ်စွဲမယ်ပေါ့။ အဲဒီလို ဖြေရင် ရှုတ်ချမယ့် အကြံနဲ့ပါ။ ဆက်ပြီး ဘုရားရှင်ဖြစ်ရဲ့နဲ့ သူများတကာကို သည်းမခံဘူး။ နိုင်အောင်ကိုလုပ်တယ်။ ဆိုတော့ အောင်ခြင်းပေါ့တွေ ဘာတွေတောင် ပါလာနိုင်ပါတယ်။ တွေးကြည့်တာပါ။
အဲဒီလို တကယ်လဲမေးရော ဘုရားရှင်က ပြန်ဖြေပါတယ်။ သင်မင်းသား ငါဘုရား သင့်ကို မေးပါဦးမယ်။ သင်ပြန်ဖြေပါဆိုပြီး အခုမြင်နေရတဲ့ သင်မင်းသားရဲ့ သားတော်လေးဟာ တကယ်လို့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတခုခု(ဥပမာ အဆိပ် အချွန်အတတ်) စသည်ဖြင့် မတော်လို့ မျိုချမိမယ်ဆိုရင် သင်မင်းသား ဘယ်လိုလုပ်မလဲ လို့မေးပါတယ်။ ဒီမှာတင် အဘယမင်းသားက အရှင်ဘုရား ဒါကိုသာ တပည့်တော်မြင်ရင် ဝမ်းထဲမရောက်ခင် မရရအောင် ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။
မတတ်နိုင်ရင် အင်အားသုံးပြီး အတင်းနှိုက်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ရင် ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောတော့ ဘုရားရှင်က သင်မင်းသား ဒီလိုဆိုရင် ကလေးငယ် အရမ်းနာနိုင်တာပေါ့လို့ ပြောတော့ မင်းသားက အရှင်ဘုရား တပည့်တော် မတတ်နိုင်ပါဘူး။ တပည့်တော် အင်အားသုံးတာက နာလိမ့်မယ် ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပစ္စည်းက ဗိုက်ထဲရောက်သွားရင် ကလေးငယ်အတွက် အသက် စိုးရိမ်စရာရှိပါတယ် တပည့်တော် သားတော်လေးကို မချစ်လို့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောတော့ ဘုရားရှင်က ချစ်သား ဒီဥပမာလိုပဲ ဘုရားရှင်များဟာ မှန်လည်းမှန်တယ် ပြောရင်လည်း အကျိုးရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကာယံကရှင်က မနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ စကားမျိုးကိုလည်း အခါအခွင့်သင့်ပြီး ပြောသင့်တဲ့ အခါမှာ ပြောရတယ်။ ဒါဟာလည်း ကြီးမားတဲ့ ဂရုဏာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆက်ပြီး နာမည်ကျော် “စကားခြောက်ခွန်း လူဝယ်ထွန်း လေးခွန်းကိုပယ် နှစ်ခွန်းတည်” ဆိုတဲ့ တရားတော်ကိုလည်း ဆက်ဟောပါတယ်။ တရားအဆုံးမှာ မင်းသားဟာ ဘုရားရှင်ကို ကိုးကွယ်သူဖြစ်သွားပါတယ်။
ဥပမာ ရှင်ဒေဝဒတ်ကို သူမကောင်းတာတွေ လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာကို သိပ်ကြီးချော့ပြောရင် သူလိုလူမျိုးက သူ့ကိုကြောက်လို့ သီချင်းဆိုပြတယ် ထင်ပြီးပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပါ။ ဒါဖြင့် ဘာလို့ မြေမျိုသွားတာလဲ ဆိုတော့ ရပ်ဖို့ပြောတာကို မရပ်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အကျိုးတော့ မယုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြေမျိုလို့ လည်ပင်းအထိ ရောက်တဲ့အခါမှာ အော်ပြောသူက ပြောပေသားပဲ ငါကိုယ်က နားမထောင်တာဆိုပြီး နောင်တကြီးစွာနဲ့ ဇေတဝန်ကျောင်းတော် ဘက်ကိုလှည့်ပြီး ရှိခိုးသွားပါတယ်။ ဒီကုသိုလ်ကြောင့် နောင်မှာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဖြစ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထေရဝါဒအရပါ။
ဒါကြောင့် သဘောတရားကောင်းသော်လည်း အခါခပ်သိမ်းတော့ ခက်နိုင်တယ် ထင်လို့ပါ။ ကျနော်လည်း ဒီသဘောတရားကို အားကျပြီး ဘုရားရှင်ရဲ့ ဖြေပုံကို ကြည်ညိုလို့ တတ်နိုင်သမျှ ဒီသဘောတရား အတိုင်းလိုက်နာဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ကြည်ညိုလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့လို့ ပုထုဇဉ်တွေနဲ့တော့ နှိုင်းလို့ မရဘူးပေါ့လေ။ ပြောရင်းနဲ့ တော်တော်ကို ရှည်ပြီး ဆောင်းပါးငယ်လေး ဖြစ်သွားပါပြီ။ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြောမှရမယ် ထင်လို့ပါ။ ဆရာမကြီး အနေနဲ့ နားလည်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီသဘောတရားကို ကျနော်မူပိုင်ခွင့် တင်ပါတယ်။ အလကား နောက်တာပါ။ ဆွေးနွေးလိုသူရှိက ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
“သိပ်ကြီးချော့ပြောရင် သူလိုလူမျိုးက သူ့ကိုကြောက်လို့ သီချင်းဆိုပြတယ် ထင်ပြီးပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။” ဆိုတဲ့ အယူအဆလေးကျွန်မတော်တော်ကြာကြာ
(ဆရာမ လုပ်သက် အနှစ်(၃၀) တစ်လျှောက်လုံး) ခြေကုတ်ယူထားခဲ့မိပါတယ်။
အောင်မြင်ခဲ့ဖူးသလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း တစ်လှေကြီးရခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုလို ကြောင်အိုလို့ ကြွက်မလေးတဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့လည်း တစ်ခါတစ်ရံ
“ငါမအိုသေး” ဆိုတဲ့မာန်နဲ့ ကာယံကရှင်က မနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ စကားမျိုးကိုလည်း အခါအခွင့်သင့်ပြီး ပြောသင့်တဲ့ အခါမှာ ပြောမိခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကိုယ့်ရပ်နေတဲ့ မြေကြီးမြေနေရာလေးတောင် ပျော့တော့တော့ ဖြစ်နေပြီလို့ တွေးမိပြီး
အရှိန်လျှော့မယ်ကြံပြန်တော့လည်း တီချာအရင်တုန်းကနဲ့စာရင် ပို လည်း လျစ်လျူရှု့တတ်လာတယ် လို့ ကလေးတစ်ချို့ထင်လာကြပါတယ်။
ကိုစံလှကြီးရေ.. ဒီပို့စ်ကိုရေးတဲ့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က အမြဲမချိုသာရမဲ့ အသက်မွေးမှု
အော် ..ကိုစံလှကြီးရေ..ကျေးဇူးပြုပြီး BC လေးလက်ခံပေးပါနော်။
Best comment ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။ အဓိကက ကျနော့်ကို ပေးတာထက် ကျနော်ရေးတဲ့ အကြောင်းက တကယ့်နာမည်ကျော် အကြောင်းအရာ ဖြစ်တဲ့အပြင် သဘောတရား အရလည်း အလွန်ကို ကောင်းမွန်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက်ဆို ဘုရားရှင်ရဲ့ ပိုင်းခြားပြီး ဖြေနိုင်တဲ့ ဥဏ်တော်ကိုလဲ ကြည်ညိုနိုင်ပါတယ်။
ဆရာမပြောတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးလည်း ရှိမှာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ရှင်ဒေဝဒတ်ကို မြေမျိုလိမ့်မယ်လို့ ပြောတုန်းက ရှင်ဒေဝဒတ်ဟာ အလွန်မုန်းတီးစွာနဲ့ ချက်ချင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောသလို တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ အခါ နောင်တကြီးစွာနဲ့ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကို မှန်းပြီး ဦးချသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကသူ့ကို နောင်မှာ မဂ်ဖိုလ်အကျိုးအထိ ပေးလိမ့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုးထဲက အကောင်းပေါ့။ သူလိုလူမျိုးက အဲဒီလို မပြောထားရင် တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဟာ ငါ့ကိုမှ မပြောတာ ငါမှမသိတာ ငါ့အပြစ်မဟုတ်ဖူးဆိုပြီး လုပ်ရင် ပိုပြီးဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဆရာမရေ လူတိုင်းကြိုက်အောင် လုပ်ဖို့ကတော့ ဘယ်လိုလူမျိုးမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အချို့ကလည်း စကတည်းက ယာဉ်သကိုဆိုသလို လူ့ကန့်လန့်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး ကြုံလို့ပြောရရင် ကျနော်စာရေးတိုင်း ဒီသဘောတရားကို အခြေခံဖို့ ကြိုးစားလေ့ ရှိပါတယ်။ လူဆိုတော့လည်း အမှားတော့ မကင်းဘူးပေါ့ ဆရာမရေ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျနော့် ဆောင်းပါးတွေထဲမှာ တခါတလေ ဝေဖန်တာတွေ ပါလာရင် တချို့က လူပုဂ္ဂိုလ်ရေး မုန်းတီးမှုလို့ ထင်တတ်ပါတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ပုထုဇဉ်သာ ဖြစ်လို့အမှားမကင်းပေမယ့် ဝေဖန်ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ သူတို့ရဲ့ မူဝါဒအမှားတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ကျနော်ပြောသွားတဲ့ စကားတွေရဲ့ သဘောတရားတွေကို မရှင်းလင်းဘူးထင်ရင် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောပါရစေ။ ဒီသဘောတရားကို မရှင်းဘူးထင်ရင် မေးမြန်းဖို့ Challenge လုပ်ပါတယ်။
ဟိုတလောက ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေးတဲ့ Professional နဲ့ personal ဆောင်းပါးရဲ့ အဖြေအနှစ်ချုပ်ကလည်း ဒါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားမစပ် ဆရာမပို့စ်ကို ကျနော်ကွန်မန့်ပေးတာ ဒီတကြိမ် ပထမဆုံးပေမယ့် ကျနော် အမြဲလိုလို တွေ့ပါတယ်။ Sticky ခဏ ခဏ ရတယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်တောင် သဘောတရားလေး ကောင်းတာရယ် ကျနော်ကွန်မန့်ရေးတုန်းက နံပါတ်သုံးလောက်မှာ ရှိတာကြောင့် sticky ရပြီလို့တောင် ထင်ထားပါတယ်။ ကျနော် ဒီကွန်မန့်တွေ မရေးဘူးဆိုရင်တော့ ရချင်ရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အခုတော့ သိပ်မထင်တော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ သဘောတရားကို နီတာတွေ ရဲနေလို့ပါပဲ။ ဆရာမရဲ့ ရိုးရိုးလေး ကွန်မန့်တောင် နီနေပါတယ်။ ဆရာမရေ နောင်လဲ အားပေးပါ့မယ်။ နီကုန်အောင်ပါဗျာ။
ခုန ကျနော် Log out လုပ်ပြီး ဆရာမကွန်မန့်ကို အစိမ်းပေးဖို့ လုပ်တာ အစိမ်းမဖြစ်ပဲ အနီတခုတိုးသွားတယ်ဗျ။ အဆန်းသားပဲ။ နည်းပညာတွေပေါ့လေ။
အခုပြောသွားတဲ့ ကွန်မန့်ပါ သဘောတရားတွေ ခံယူချက်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး မရှင်းတာကို မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းပါ။ ကျနော် ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ challenge လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကို San Hla Gyi ရေ ။
ကို San Hla Gyi ပြောလို့ ကျွန်တော် log in မ၀င် ရခင်မှာ စမ်းကြည့်ပါတယ် ။ ဆရာမကြီး မှာ အနီ ၂ ခုဖြစ်နေတာ ကျွန်တော် တစ်ခါ စိမ်းလိုက်ပြီး တဲ့ အခါမှာ နှစ်ခုလုံး ပျောက်သွားပြီး သုညဖြစ်သွားပါတယ် ။
ဒါနဲ့ ကို San Hla Gyi မန့်ထားတာ အနီ ခြောက်ခု တွေ့လို့ စမ်းပြီးစိမ်းကြည့်တော့ ၅ခု ကိုသာ ပြောင်းသွားပါတယ် ။
ကိုSan Hla Gyi ကွန်က ဘယ်လောက်ကောင်း မြန်လည်းမသိပေမဲ့ မြန်မာပြည် ကွန်နက်ရှင်နဲ့ဆို နဲနဲ စောင့် ရပါတယ် ။ ဒီ အချိန်မှာ ဘယ်နှစ်ယောက် ၀င်လုပ်သွားတယ် ဆိုတာ ကို San Hla Gyi သိမသိ တော့ မသိပါဘူး ။ ကျွန်တော် တော့ မသိပါဘူး ။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ ကိုSan Hla Gyi ရေ ၊ သံသယ တွေ သိပ်များရင် ပူလောင်ပါတယ် ဆိုတာလေးပါဘဲ ။
ကျွန်တော် ကို San Hla Gyi လို့ ရေးတာ စန်း လား စံ လား မသေချာဘူး ဖြစ်သွားလို့ မြန်မာလို မခေါ်တာ နော် ။ ကျွန်တော် လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် လျှောက်ပေါင်းပြီး ထူး ဆန်း (san) ပေါင်းထားတော့ တလွဲရေးမိမှာ စိုးလို့နော် .. :grin:
ဆရာမကြီး ပိုစ်နဲ့ မဆိုင်တာ ၀င်လျှာရှည်မိတာတော့ ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ ။ ကိုSan Hla Gyi က သံသယ တွေ သိပ်များနေသလို ခံစားမိလို့ပါခင်ဗျာ….. .
ကျနော်ခင်ဗျားရဲ့ ကွန်မန့်ကိုတော့ မ pooch ကိုရှင်းပြတဲ့ အထဲမှာ ရောပြီးရှင်းပြလိုက်ပါပြီ။ အဲဒီမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ ကျနော်စမ်းကြည့်ပြီးမှ ပြောတာပါ။
သံသယကတော့ ရှိနေတယ်ဗျ။ ပြောခဲ့ပါသော်ကော။ ကျနော်က ပုထုဇဉ်ပါလို့။ နည်းပညာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်လဲ မြင်ရတာ မဟုတ်လို့ သေချာပေါက်တော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ အခုလဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ နာမည်မတပ်ပါဘူး။ အော်တိုမက်တစ်ဆိုတဲ့ ကောင်ကြီးပဲ ဖြစ်မယ်။ ဒီကောင်ကြီးကို ကျုပ်ဝေဖန်ဖူးတယ်ဗျ။ ဟဲ ဟဲ နောက်တာပါ။
ထားပါ။ ဒါတွေပြောရင် လမ်းလွဲသွားလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားက ကျနော့်ကို သံသယများတယ် ပြောတာနဲ့ ဝမ်းသာသူရှိတယ် လို့တောင်သံသယ ဖြစ်မိတယ်ဗျ။ နောက်ပြီး ခင်ဗျားကို ပြောရဦးမယ်။
သူများက ပြောတိုင်း ယုံလို့တော့ မဖြစ်ဘူးဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တချို့ကလည်တော့ စကားလှည့်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့စကားတွေကို ကျနော်က ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်။ အခုတလောတောင် ကျေးဇူးတင်ဖို့တို့ ဘာတို့ပြောတဲ့ အသံလေးတွေ ကြားလာရသလိုပဲ။ သိပ်မပြောရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျနော် ဆွေးနွေးရင် ထပ်နာနိုင်ပါတယ်။
ကိုထူးဆန်းရေ သံသယများတာ မကောင်းသလို သူများပြောတိုင်းလည်း ချင့်ယုံပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
တီချယ်ကြီးရေ ကျွန်တော့်အဖြေပိုစ့်လေး တင်ပေးပြီးကြောင်းပါ ခင်ဗျ။
အမည်နဲ့ တီချယ်ကြီးရဲ့ အမေးလေးကို အဖြေပိုစ့်လေး တင်ပြီးကြောင်းပါ ခင်ဗျ။
ဟုတ်ပါတယ် တီချယ်ကြီးခဗျာင်္…အရှည်ကြီး comment မရေးတော့ပေမယ့် စဉ်းစား၊ ဆင်ခြင်စရာတွေ အများကြီးရလိုက်ပါတယ်ခဗျာင်္း။
နောက်တခါ ဆို ဆင်ခြင်ပါ့မယ် တီချယ်.. ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် လက်မထောင်တော့ပါဘူး
2000 gp မှာ လုပ်အားပေးဆရာမ လုပ်တဲ့ ကျမတူမကတော့ ကျမကိုဝေဖန်နေတယ်။
ကျမက ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရော တူတူမတွေအပေါ်ရော ထစ်ခနဲရှိဆူနေလို့တဲ့။
ကျမစံနဲ့လွဲတာတွေ့တာနဲ့ ၊မကြိုက်တာလေးတွေ့တာနဲ့ ကျမက ခေါ်ပြောတတ်တော့ သူတို့ကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတာနဲ့ မတူဘူးတဲ့။
တကယ်ဆိုရင် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပုံတိုပတ်စနဲ့ ပြောမှ နားဝင်မယ်လို့ ဝေဖန်နေလေရဲ့။ကျမလည်း သူတပါး အခံရခက်တဲ့ စကားတွေ ချည်းပြောနေမိလားမသိတော့ပါဘူး။
ကိုစံလှကြီးရဲ့ ကွန်မန့်လည်း BC ရထိုက်ပါပေရဲ့။
ကျမလည်း ကိုစံလှကြီးကို ရှင်းပြချင်ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က မကျွမ်းကျင်တော့ သူ့သံသယတွေ ဖြေလျှော့မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။
“ကျမစံနဲ့လွဲတာတွေ့တာနဲ့ ၊မကြိုက်တာလေးတွေ့တာနဲ့ ကျမက ခေါ်ပြောတတ်တော့ သူတို့ကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတာနဲ့ မတူဘူးတဲ့။”
ဒီစကားလေးက တီချာကို Message တစ်ခုပေးသွားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
တီချာလည်းအဲဒီလိုလုပ်မိလို့လေ။ ဆင်ခြင်ရမယ်။ အင်း… နောက်ကျတောင်နေရော့မယ်။
မ pooch နဲ့ ကိုထူးဆန်းရေ
အင်း အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က သံသယများသူထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာမှ ပြောတာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော် ပထမကွန်မန့်ရေးပြီးလို့ တော်တော်လေးကြာလို့ ဝင်ကြည့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က မေးမြန်းနိုင်တယ် ပြောထားလို့ မေးတဲ့လူ ပေါ်လာရင် ကျနော့်ပို့စ် မဟုတ်လို့ မသိနိုင်လို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော့်စကားနဲ့အညီ ဖြေရအောင်ပါ။
အဲဒီမှာ သိချင်လို့ Log in မလုပ်ပဲ ဒီအတိုင်း ပထမဝင်ကြည့်ပါတယ်။ ဆရာမ TTNU က BS ပေးထားတာ တွေ့ပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက အဲဒီမှာ အစိမ်းတွေ အနီတွေ ပေါ်မနေပါဘူး။(ကျနော် သိသလောက်တော့ ဒီ အနီတွေ အစိမ်းတွေက member မဟုတ်လဲ မြင်ရနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော် ဒီကိစ္စကို အခုနည်းနည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ မရိုးမသား လုပ်လို့ရတယ်လို့ ထင်လို့ပါ။) ဒါနဲ့ ကျနော်သိချင်လို့ Log in လုပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော့်ကွန်မန့်မှာ အနီ ၅ ခု ဆရာမကွန်မန့်မှာ အနီ ၂ ခုဖြစ်နေတာ တွေ့ပါတယ်။
အဲဒါကိုတွေ့တော့ ပိုထူးဆန်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်ရေးထားတာက ရိုင်းစိုင်းတာ မပါတဲ့အပြင် အကြောင်းအရာပိုင်းကလည်း တကယ့်ကို အမှန်ပါ။ နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များလည်း ကြည်ညိုစိတ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သူများဘာသာကိုလည်း ပုတ်ခတ်တာ မပါပါဘူး။ ဒါကို အနီပေးတယ်ဆိုတော့ ကျနော့်စိတ်ထင် ဘုရားလက်ထက်က အရှင်ဒေဝဒတ်ကြီးရဲ့ အဆက်အနွယ် တပည့်တပန်းတွေ ကျန်များကျန်နေသလားတောင် တွေးစရာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်သိပါတယ်။ ဒီကွန်မန့်က သိပ်မှန်ပေမယ့် ဒီကိစ္စကြောင့် ထိသူတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီကွန်မန့်သာ မရှိရင် ဒီပို့စ်က အခြေအနေတမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကျနော်စမ်းကြည့်ချင်လို့ Log out လုပ်ပြီး ပြန်ဝင်ကြည့်ပါတယ်။ အနီတွေ အစိမ်းတွေ မမြင်ရတော့ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ စမ်းကြည့်ရအောင် ကိုယ့်ကွန်မန့် ကိုယ်ပြန်ပြီး အစိမ်းပေးကြည့်ပါတယ်။ ခင်ဗျားက အဲဒီလိုလားလို့ မေးရင် ဟုတ်ကဲ့ အရင်တုန်းက မလုပ်ပါဘူး အခုတော့ ဒီကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါသော်ကော။ အဲဒီမှာ ထူးဆန်းတယ် ဆရာတို့ရေ ကျနော်က အစိမ်းသေသေချာချာ နှိပ်ကြည့်တာ အနီတခု တိုးသွားပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က ချက်ချင်း Log in ဝင်ပြီး ပြန်ကြည့်လို့ပါ။ ပိုပြီး ထူးဆန်းလာပါတယ်။ အော်တိုမက်တစ် စက်ကြီးက လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နည်းပညာ ပြဿနာပါ။
အဲဒီတော့ ကျနော်အထင် မှားလျှင်လည်း ပြောမိတဲ့အတွက် Sorry ပါ။ နည်းပညာ ပြဿနာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဒုတိယကွန်မန့် ရေးပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ အခြေအနေတွေ အားလုံးပြောင်းသွားပါတယ်။ ကဲ အားလုံးပဲ မဆိုင်တာကို ပြောမိတဲ့အတွက် sorry လို့ထပ်ပြောပါမယ်။ ကျနော်ရဲ့ ပထမဆုံးပေးတဲ့ ကွန်မန့်မှာပါတဲ့ အယူအဆနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဆွေးနွေးလိုလျှင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
အနီ အစီမ်းကိစ္စတော့ သိပ်ခေါင်းထဲ မထားစေချင်ဘူး ခင်ဗျ ။ log in မ၀င်ဘဲလုပ်လို့ ရတော့ တမင်လိုက်လုပ်နေသူတွေလည်း ရှိပုံရပါတယ် ။ ဒီအနီ အစိမ်း က စိတ် ကသိကအောက်ဖြစ်ကြလို့ ခဏ ခဏ တော့ ပြော နေကြတာပါဘဲ။
log in မ၀င်ဘဲလည်း အနီ အစိမ်းက အများအားဖြင့် မြင်ရပါသည် ။
ဒါပေမဲ့ ကွန်မန့်တစ်ခု ကို ကိုယ်က တစ်ခါ ဘဲလုပ်လို့ ရတယ် ထင်ပါသည် ။ အဲ့ဒီ့ပိုစ်က ပြန်ထွက်ပြီး ပြန် ၀င်လုပ်ရင် ရမရတော့ မစမ်းကြည့်ရသေးပါဘူး ။
မဟုတ်ပါဘူး ကိုထူးဆန်းရေ။ ကျနော်က ဒီကိစ္စကို သိချင်စိတ်ရှိနေပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုဘုရားအကြောင်းရေးတဲ့ စာကောင်းလေးနီနေတာပါ။ ကျနော်ထပ်ပြီး highlight လုပ်ပါတယ်။ ခင်ဗျား အဲဒီလိုပြောရင် အဲဒါက ခင်ဗျားရဲ့ သဘောထားပါ။ ဒီမှာကလည်း တခါတလေ ကောင်းတဲ့ Hits တွေပေါ်တာမျိုးဆိုရင် ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
အခုပြောတဲ့ မမြင်ရဘူးဆိုတာ ကျနော်တကယ် စမ်းကြည့်ပြီးသားပါ။
တီချယ်ရေ ခုလိုရှင်းပြပေးလို့ ပြန်ဝေမျှပေးပေါ့မယ်။ဒါလေးပါနော့်။
ဒီ reverse peace sign ကိစ္စကလည်း UK မှာ ပိုပြီး
sensitive ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့
(အထူးသဖြင့် Oriental ပိုင်း) သိပ်မသိ၊ သတိမထားကြပါဘူး။
ngamyo ngaaa says:
အင်မတန် အကျိုးများမယ့် အချက်ကလေးတွေ..ကို ပြောပြလို့ ..တီတီနုရေ..
ကျွန်မစာလေးကို လာဖတ်ပေးသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုစန်းလှဂျီးရေ ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက် အကို ကွန်မန်.ကအနီတွေကိုဝင်ရှင်း
ပေးသွားပါဒယ်။ဘာရယ် မဟုတ်ပါဝူး အကိုကွန်မန်.လေးတွေကိုကြိုက်လို. ကြုံလဲကြုံကြိုက်
လို.ပါ ။ နီတာ စိမ်းတာသိပ်ဂရုမစိုက်ပါနဲ. အစ်ကို ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာသာဆက်လုပ်သွားပါ
ဆရာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ရပါ။ စကားမစပ် ကျွန်တော်ကွန်မန်.အပေးနည်းပါတယ်
ကို captainamerica ရေ
ကွန်မန့်တွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုလို့တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ တကယ်လဲ ကျနော်က မေးသူရှိရင် ကွန်မန့်ကိုတောင် တော်တော်လေးကောင်းအောင် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားပြီး ရေးတာပါ။ တခါတလေ အချက်အလက် တော်တော်များများ မူရင်းဆောင်းပါးမှာ ကျန်ခဲ့တာကို ကွန်မန့်တွေနဲ့ ပေါင်းမှ စုံသွားတာလည်း ရှိတယ်။ ခင်ဗျား ခရီးသွားနေတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်ရေးတဲ့ မွန်ဂိုဘုရင် ဂျင်ဂစ်ခန်ပို့စ်နောက်ပိုင်း သိပ်တောင်မတွေ့မိသလိုပဲ။ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျနော်က စိတ်ဆိုးတယ် ဆိုတာထက် အားမလိုအားမရ ဖြစ်တာဗျ။ အမှန်တော့ ကွန်မန့်တွေက အကြိုးသင့် အကြောင်းသင့် ရေးထားလို့ ချေဖျက်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အနီလိုက်ပေးရတာပါ။
အမှန်တော့ ကျနော်က ကျနော်ပြောတာကို မကျေနပ်ရင် ချက်ချင်းဆွေးနွေးစေချင်တာ။ အဲဒါကြောင့် ခဏခဏ ခေါ်နေတာပဲ။ အင်း ခုတော့ ပြောလက်စနဲ့ တခါတည်း ပြောလိုက်ဦးမယ်။ ဒီဆိုက်မှာ ကျနော် ကြိုက်တာတွေ ရှိသလို မကြိုက်တာတွေလဲ ရှိတယ်။ ကြိုက်တာက စပြောမယ်။
ကြိုက်တာက စာရေးချင်တဲ့လူတွေက ရေးချင်သလို ရေးနိုင်အောင် လုပ်ထားတာ။ တခြားမဂ္ဂဇင်းတို့ ဘာတို့ကျတော့ မသိတဲ့လူက ရေးဖို့မလွယ်ဘူး မဟုတ်လား။ အဲဒီတချက်တော့ အူလှိုက်သည်းလှိုက်ကို သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ နှစ်ကြောင်း သုံးကြောင်းနဲ့ ကောင်းကောင်းရေးဖို့ မလုပ်တာကျတော့ ကာယကံရှင်ရဲ့ အပြစ်ပါဗျာ။ မူနဲ့ မဆိုင်တော့ပါဘူး။
တချို့လည်း ရေးချင်ပေမယ့် ရေးချင်သလို ထွက်မလာတာလည်း ရှိတတ်တာပေါ့။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပါ။ ပြင်ရမှာပေါ့။ ဒါကလဲ ဥပမာပေးရရင် သေသေချာချာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသမား တယောက်ကျတော့ အခြားသူတွေ ကစားတဲ့ တိုက်ကွက်တွေကို တကွက်ချင်း မြင်သလို တန်ပြန်တိုက်ကွက်ကိုလဲ ချက်ချင်းပြန်ထုတ် နိုင်သလိုပေါ့။
အင်း မကြိုက်တာကတော့ ဒီလိုပြောလို့ ကြိုက်ချင်မှတော့ကြိုက်မယ်။ ကျနော့်အမြင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ တော်တော်သေချာတယ်လို့ထင်တယ်။ ကျနော် စဝင်လာကတဲက သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တရားမျှတတဲ့ လူလူမျိုး လူဝါဒသမားလို့ ကြွေးကြော်ထားသူတွေကျတော့ အဲဒီလို အနေအထားရောက်အောင် ဆိုပြီး လူမျိုးကြီး ဘာသာကြီးတွေ လူများစုတွေကို ကြုံရင်ကြုံသလို ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ပြောလေ့ရှိတယ်ဗျ။
အင်အားနည်းသူတွေ ဘက်ကရပ်တည်ပါတယ်ပေါ့။ ဥပမာ ဗမာတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဆို ဗမာက လူများစုမဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ ဗမာတွေကို နင်ပဲငဆ ရစရာမရှိအောင် ပြောလိုက်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် တရားတယ်ဆိုပြီး ထင်တတ်တယ်ဗျ။ အမှန်တော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်လိမ်တာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တရားမျှတမှု မှန်ကန်မှုဆိုတာ အင်အားကြီးတာ ငယ်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူးဗျ။ အင်အားကြီးလို့ အမြဲတမ်းမှားနေတာ မဟုတ်သလို လူနည်းစုဆိုလို့လဲ အကုန်မှန်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ လူများစုက လူနည်းစုကို ဦးစားပေး ညှာတာရမယ် မဟုတ်လားလို့ ပြောရင် ဟုတ်ကဲ့ ဦးစားပေးနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒါကလိုသလို ပြောဆိုစော်ကားခွင့်ပေးမယ် ဆိုတဲ့အာမခံချက် မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုပဲ တခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆို ဗုဒ္ဓဘာသာဦးရေက များတယ်မဟုတ်လား။ ဒီလိုပြောလိုက်လို့ ဇယားလေးဆွဲပြီး ကမ္ဘာမှာ လူဦးရေဘယ်လောက် အင်းအနိစ္စဆိုပြီး ပြောဖို့မလုပ်ပါနဲ့။ ကျနော်ပြောတာ ဒီဂေဇက်မှာ စာဖတ်တဲ့လူတွေထဲက ပြောတာပါ။ စာရင်းမကောက်ရသေးပေမယ့် ကွန်မန့်တွေကို ကြည့်တာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဦးရေ ပိုများတာ သိသာပါတယ်။ အဲဒီမှာလဲ ဒီလိုပဲ စော်ကားမော်ကား စကားလေးတွေကြုံရင် ကြုံသလိုပြောဖို့ လုပ်တယ်ဗျ။ တကယ်တော့ ဟန်ဆောင်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှည့်စားနေတာပါ။ အဲဒါတွေတော့ မကြိုက်ဘူးဗျို့။
ပြောဖို့ ကျန်ခဲ့လို့ ကိုကတ်ပတိန် အမေရိကားရေ။ ကျနော့် ကလောင်အမည်က စံလှကြီးပါဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်စရေးတာ အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ အကြောင်းဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ရဲမက်တော် ခြောက်ကျိပ်ကိုးထဲက အမာခံ မြင်းရည်တတ် သူရဲကောင်းကြီးရဲ့ ငယ်နာမည်ကို ကလောင်အမည် ယူလိုက်တာပါ။
အားမငယ်ပါနဲ့ဗျာ။ ခင်ဗျားနဲ့ တစ်သဘောတည်းကျုပ်လဲ ရှိပါတယ်။
ကိုစံလှကြီးရဲ့ ဘက်တော်သားတွေထဲ ကျုပ်လဲပါပါတယ်။
ဆရာမ TTNU ရေ
ပထမဆုံး ဆရာမကို တောင်းပန်ပါရစေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က ကျနော်ပို့စ်မဟုတ်ပဲ အများကြီး အမေးအဖြေတွေ လုပ်လိုက်လို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်ရုတ်တရက် ကွန်မန့်မပေးတာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိပ်လေကြောရှည်လို့ပါ။
ကိုမိုးတိမ်ရေ ခင်ဗျားပြောသလို အားငယ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး မရှိပါဘူးဗျ။ ခင်ဗျား အဲဒီလို ပြောလို့ သူများတွေ ဝမ်းသာအုံးမယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးရတာ မတန်ဘူးလို့ ထင်နေတာတော့ ရှိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်စာရေးစတုန်းက Hits တွေပေါ်တယ်ဗျ။ အဲဒီတော့ အဲဒါကို ကျနော်က သိပ်ဂုဏ်ယူတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် စာပေဆုတို့ စာရွှီးဆရာဆုတို့(ရခိုင်လေသံဖြင့်) ကိုကျနော်က သိပ်ပြီး အရေးကြီးတယ်လို့ မထင်ဘူးဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဆုတွေက ရွေးတဲ့လူတွေ မှားနိုင်သလို ဘက်လည်းလိုက်နိုင်လို့ပဲ။ အင်း ဒီလိုပြောလို့ ခင်ဗျားရေးတာကော ကောင်းလို့လားလို့ မေးရင်တော့ ဘယ်သူ့လက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာသိတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။
ခင်ဗျား ကြားဘူးမလားတော့ မသိဘူး။ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ကျော်ဆွေကို ပရိသတ်က သိပ်ကြိုက်ပေမယ့် အကယ်ဒမီတော့ မရခဲ့ဘူးတဲ့။ မီလိုက်တဲ့ လူကြီးတွေ ပြောတာတော့ မင်းသားကြီးရဲ့ အပြောအဆိုတွေက အုပ်ချုပ်သူတွေ မခံနိုင်လို့ မတည့်လို့လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းသားကြီးက သူ့ကားတွေ ရုံတင်တာနဲ့ ပရိတ်သတ်က ဝက်ဝက်ကွဲကြည့်ပြီဆိုရင် သိပ်ဂုဏ်ယူတယ်တဲ့။ ဒါကတော့ ကောင်းတဲ့ စနစ်တခုကို ထိန်းသိမ်းသင့်ကြောင်း သတိပေးတာပါ။ အားလုံးအတွက်ပါ။
ကိုမိုးတိမ်ပြောတဲ့ အရှက်မရှိတဲ့ လူတွေကို ပြောခဲ့အုန်းမယ်။ ကျုပ်မိတ်ဆွေတွေ မပါပါဘူး။ ခဏနေပါ။ ဒီဗဟုသုတလောက်နဲ့တော့ သခင်စာနယ်ဇင်းသမားဆိုတဲ့ နာမည်မခံပါနဲ့အုန်းဗျာ။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ မတန်ပါဘူး။ ဘာမှလဲ အဖြစ်မရှိပဲနဲ့။ ကြုံလို့ ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ အကြွေးဇတ်ကားမှ လေသံဖြင့် ပြောပါ့မယ် ဟဲ ဟဲ။ ကြည့်ဖူးသူများက ကိုကျော်ဟိန်းက မင်းသားကျော်သူကို လက်ဆယ်ချောင်း ထောင်ပြနေပုံကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ကိုမိုးတိမ်ရေ အမှန်တော့ ဟိုတလောက မိုးလုံးဟိန်းချုံးဂိုဏ်းသား နှစ်ယောက်ကို ကျနော် နည်းနည်းလေး မေးလိုက်တာနဲ့ ကွဲတော့တာပဲ။ အဲဒီတော့ သူတို့က ဆဲရုံ ကန့်ကွက်ရုံနဲ့ မဖြုံဘူးဗျ။ သေသေချာချာ သူတို့ မှားတာကို ထောက်နိုင်မှရတာ။ အမှန်တော့ သူတို့လည်း ကျနော်နဲ့ အမေးအဖြေလုပ်ရင် သိပ်မလွယ်လောက်ပါဘူး။ ဘာလို့သူတို့ ဘုရာစာကို လိုရာဆွဲရေးတိုင်း မဝင်တာလဲဆိုတော့ နားထောင်တော့ အားလုံးနားထောင်ပြီး လူကြမ်ဖြစ်ရင် ကိုယ်တယောက်ထဲ ဖြစ်မှာမို့ အခါခပ်သိမ်း မဝင်တာပါ။ အခြားလူတွေ ပြောဖို့ပါ။ သူတို့ကိုပါ ပြောလိုက်အုန်းမယ်။
“သေနတ်ပစ်တယ်ဆိုတာ ဟောဒီလို လက်ညှိုးလေးကွေးတတ်ရတယ်။ အဲဒီလို လက်ညှိုးလေး ကွေးတတ်ဖို့ ၁၀ နှစ် ၁၀ နှစ် လေ့ကျင့်လိုက်ပါအုံး ဟဲ ဟဲ။ သွားပြီ တာ့တာ့။”
တီချာကြီးရဲ့ ဆုံးမသြ၀ါဒကို ဖတ်ရှု့မှတ်သားသွားပါတယ်။
အခုလို အသိတရားတွေ မျှဝေပေးတဲ့ တီချာကြီးလို သင်စရာမျိုးဆီက သင်ယူရလို့ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာပါတယ်။
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေဆိုသလို တချို့ကလည်း လူအချင်းချင်း ကြောသလိုလို မောသလိုလိုလေး လုပ်ရမှ ကျေနပ်တတ်သူတွေလည်း ရှိသေးတာမို့
ဟုတ်ပါ့နော်။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေတဲ့။
မမရေ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲတောင် မနက်တစ်စိတ်၊ညတစ်စိတ်
ဖြစ်တတ်သေးသကိုး။ တရားထိုင်ပြီဆိုရင် လာပြီ စိတ်မျိုးစုံ၊ စိတ်ရောင်စုံ။
အဟီး ………တီချယ်ကြီးရေ ….. သမီး ဓါတ်ပုံရိုက်လျှင် …တည့်တည့်ကြီးငြိမ်ရပ်နေတာထက် …. လက်နှစ်ချောင်း အမြဲထောင်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ် …. ။ ကိုယ့်အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ကိုယ်ကတော့ …. victory ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ပေါ့နော် …. သို့သော်လည်း…. တီချယ်ပြောမှ ….. .Two fingers ina‘V’ sign means victory and peace when the palm is towards the person(s) being gestured. If the palm is the other way it is consideredarude sign or challenge. ဆိုတာ ဖတ်ရတော့ …… လက်ထောင်တဲ့ အကျင့်ကို ဖျောက်ပစ်ရပါတော့မယ် … ။ အကျင့်ဖျောက်မယ်သာ ပြောတာ…. လျှပ်တပြတ်ဆိုလျှင်တောင် လက်ထောင်တဲ့ အကျင့်က မသိစိတ်မှာတောင် စွဲနေတာမို့ ဖျောက်ရတော့ အတော်ခက်မယ်ထင်ပါတယ် ။
တစ်ခါကအရမ်းခင်တဲ့ မိသားစုက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းကပ်တို့ သမီးတို့ မိသားစုလိုက်သွားတရားနာကြတယ် …. အစ်ကိုဖြစ်သူက ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပါတယ် …. သူ့ညီမရိုရိုကျိုးကျိုး တရားနာနေတဲ့ပုံကို စချင်စိတ်နဲ့ အနားလာရိုက်တာ …. ၊( အံမယ် ..ငါ့အစ်ကိုက)တမင်ဓါတ်ပုံလှမ်းရိုက်တယ်ဆိုတာလည်း သိရော ….လက်အုပ်ချီပြီးတရားနာနေရာကနေ …. လက်နှစ်ချောင်းထောင်ပြလိုက်မိလို့ …….. အိမ်ပြန်တဲ့အခါ ဆူခံခဲ့ရတာ အမှတ်ရပါပဲ … ။ ဘုန်းကြီးတရားနာနေတုန်းတောင် ….. ၊ စိတ်နဲ့ လူနဲ့ မကပ်ဘူးတဲ့လေ … သမီးအကျင့်က အဲ့လိုကို စွဲနေတာ …. ။